travelberlin Archives | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ နယ်လှည့်အဆုံးစွန်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်သင်ကလုပျသငျ့အိတ်အခမဲ့, အထူးသဖြင့် layovers ဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံဂျာမဏီရဲ့လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်အခမဲ့တစ်ရက်ရှိပါက. ကျနော်တို့သုံးဘို့သင့်ကိုဂျာမနီရှိလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာများအတွက်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှိ…
ဘာလင် မှစ. ယူပါရန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘာလင်မှကိုယ်တိုင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်ကူးကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သော်လည်းဘာလင်မှအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောနေ့ခရီးစဉ်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်! သငျသညျနေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်ဂျာမနီမြို့တော်အလုံအလောက်ကြီးမြတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, day trips from Berlin to the neighboring towns and countryside can…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ခရီးသွားကိုမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့် Eco-friendly ရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်. ခြောက်နာရီကြာခရီးစဉ်ကိုနည်းနည်းနှေးကွေးပေမဲ့, သက်သာအဆိုပါရထားကကမ်းလှမ်းနှင့်ခရီးစဉ်၏ကျက်သရေထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်. With beautiful scenery along the…
ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘလော့ဂ်တစ်ခုမမေ့နိုင်သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားလပ်ရက်များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပမြို့သို့ရထားခရီးအတူစတိုင်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲရန်နေရာများအကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာယဉ်ကျေးမှုညဥ့်ကိုရှာဖွေနေကြသည်ရှိမရှိ, တစ်ဦးအံ့မခန်းမီးရှူးမီးပန်းများ display ကိုပါသို့မဟုတ်ယခုနှစ်ပါတီ, ကျွန်တော်တို့…